I-Casino ye-FastPay-indawo esemthethweni, ubhaliso 2021
Ulwazi olusisiseko malunga ne-portpay portal
Iibhonasi kunye nenkuthazo
Isango elibukhali le-Fastpay Casino lasekwa kutshanje-ehlotyeni le-2018. Ngexesha elifutshane kangako, indawo izuze ngempumelelo igama eliqinileyo kunye nabaphulaphuli ababanzi babathengi abaqhelekileyo, abaqhubeka bekhula. Abaququzeleli bajolise ekuboneleleni ngemidlalo enobulungisa necacileyo, etsala abantu abangcakazayo kwaye ibavumele ukuba bonwabe ngokwenene kumaziko akwi-Intanethi.
I-Fastpay Casino isebenza phantsi kwelayisensi enenombolo yobhaliso engu-8048/JAZ2020-013 kwaye iqhutywa nguDama NV, osebenza phantsi kolawulo lweCuracao. Ngaphandle kokumncinci kwayo, ibandakanyiwe kuluhlu lweekhasino ezilungileyo ze-Intanethi. Esi sisiqinisekiso sokhuseleko kunye nokungenamkhethe, ngoko ke nabasebenzisi abangenamava aboyiki ukukhetha iwebhusayithi yabo esemthethweni ngexesha lokuzonwabisa.
Ingqondo yekhasino ijolise ekunikezeleni abathengi ngedipozithi yangoko nangoko kunye nokuqinisekiswa kweakhawunti ngokulula. Abasebenzisi baqinisekisiwe ukurhoxiswa okukhawulezayo kwemali ephumeleleyo kunye nokuqinisekiswa okuqinisekileyo. Ukulandela iindlela zangoku, i-kasino Fastpay inenguqulo ephathekayo, kunye nezipili ezisebenzayo, ezandisa kakhulu amathuba okungcakaza. Phakathi kwamaqabane eklabhu, unokubona ababoneleli abadumileyo behlabathi abasebenza kwishishini lokungcakaza ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini.
Abatyeleli besiza baqaphela imeko entle yewebhusayithi esemthethweni kunye nendawo efanelekileyo yeebhloko zayo ezisebenzayo. Iibhanile eziqaqambileyo zithathelana indawo, zibonisa iindwendwe kunye namalungu abhalisiweyo eklabhu ye-FastPay Casino lonke ulwazi oluyimfuneko, kunye nokuvuselela umdla kwinto eyenzekayo kwiindonga zayo ezibonakalayo.
Iphepha eliphambili linobhaliso, ukungena ngemvume kunye neethebhu zemenyu. Ulungelelwaniso oluhlanganisiweyo lwenza kube lula ukuhamba nakwabaqalayo. Abangcakazi abavela kumazwe ahlukeneyo baya kuziva bekhululekile kumaphepha ayo, kuba ilungiselelwe inani elikhulu leelwimi ezahlukeneyo:
IsiSpanish, iSweden, isiNorway, isiFinnish, isiMalay, isiKazakh, isiTurkey, isiFrentshi, isiCzech, isiJapan kunye nezinye ezininzi azifanelekanga.
Uhlobo lwewebhusayithi esemthethweni ye-Fastray yahlulwe ngemibala eqaqambileyo, ke ngoko iyonwabisa. Ukunqongophala kolwazi olungafunekiyo kunye noyilo oluhle likuvumela ukuba ubaleke ngokukhawuleza kwiingxaki zemihla ngemihla, uziphose entloko kwiintlobo zokuzonwabisa zokungcakaza.
Ngaphandle kwento yokuba ubhaliso kwiwebhusayithi esemthethweni ye- Fastpay Casino iyafuneka kuphela kwabo bathathe isigqibo sokuba lilungu elisemthethweni leklabhu kwaye baqale ukudlala imali yokwenyani, abasebenzisi bayayonwabela. Ubhaliso lomsebenzisi :
ibonisa iinjongo ezinzulu zomngcakazi;
ivumela abathengi besiza ukuba banandiphe amalungelo amaninzi, njengeebhonasi, ii-spins zasimahla, unyuselo, ukubuyiselwa imali;
ibonisa ukuba ilungu elitsha leklabhu liyavumelana nemigaqo yesango kwaye sele ifikelele kubudala besininzi.
Ukwenza iakhawunti yokudlala ekhasino, ngenisa nje indawo yesiza kwaye ucofe iqhosha lobhaliso. Kuthatha ixesha elincinci kwaye kuthetha:
ukugcwalisa iprofayile yomsebenzisi ngegama eligqithisiweyo kunye nedilesi ye-imeyile;
ukhetho lwemali yeakhawunti;
isiqinisekiso sokufumana ukukhutshwa ngohlobo lokuthumela iposi;
ukufunda imigaqo-nkqubo yeziko;
ubungqina bokufaneleka kwebhokisi yeposi.
Inqaku lokugqibela lenziwa ngokunqakraza kwikhonkco lokuvula, elileta evela kulawulo lwesango. Emva kokuba ungumnini weakhawunti yobuqu kwikhasino ye-FastPay, umngcakazi uya kwicandelo "leProfayili yedatha" kwaye ugcwalisa onke amabakala ayimfuneko ukuze ulawulo lube nolwazi malunga nomdlali.
Iqhayiya lesiza lukhetho olukhulu lokuzonwabisa. Ezona zithandwa kakhulu ngoomatshini ekufakwa, kodwa apha unokufumana:
iitafile ezinabathengisi abaphilayo.
Iholo yokungcakaza i-Fastpay ineendawo zokubeka ezingaphezulu kwama-2500. Banikwa ngabathengisi abangamashumi amane, ezona zidumileyo zezi: Evolution, NetEntertainment, Microgaming, Yggdrasil Gaming, Playtech, Endorphina, Play N 'Go, Igrosoft, Nextgen, njl.Ukucaca kwazo zonke iindawo ezikhoyo kweli ziko ngumgangatho wazo ophezulu nesisa.
Imenyu yegumbi lomdlalo:
kwiindawo zokubeka - icandelo elinomatshini oqinisekileyo;
entsha - zonke iindawo ezisandula kukhutshwa kutshanje ngababoneleli kwaye zavela kwikhathalogu yendawo;
phila - imidlalo engaphezu kwe-150 ene-croupiers yangempela;
I-roulette kukuzonwabisa okudala nakweyiphi na ikhasino;
thenga ikamva-isoftware enokwazi ukuthenga imisebenzi yebhonasi;
IBITCOIN, ETH, LTC.
Zizixhobo ithandwayo iNcwadi Of Fastpay, Crazy IHalloween, Aztec Pyramids, Dolphins Gold, 777 Diamonds, Fruits & Diamonds, Jungle Ubuncwane, Incwadi Of Izizwe, njl Kuba bonke abasebenzisi abangenazo benamava, kukho ithuba lokuba umdlalo simahla kwikhasino yeFastpay . Idemo ayifuni ukubhaliswa okanye imali kwidiphozithi.
Ngokukhawuleza emva kokuvulwa, indawo inike abathengi bayo ibhonasi yokwamkela ukugqiba ubhaliso, kodwa namhlanje eli thuba likhutshiwe kuluhlu lwamalungelo. Endaweni yoko, amalungu amatsha afumana iphakheji eyamkelekileyo. Yenza kube lula ukuzalisa idiphozithi ngokwemiqathango efanelekileyo.
Kwisiqalo sokuqala, ubungakanani besipho esivela kwikhasino siya kuba yi-100% kwaye siyakongezwa nge-100 yasimahla yeFS. Ngexesha ledipozithi yesibini, umthengi uya kufumana ibhonasi ye-75% yemali ebekiweyo kwiakhawunti. Elona xabiso liphantsi lemali lokwenza idiphozithi kwidiphozithi yokuqala yi-1000 RUB, 20 EUR, 20 USD, 8800 DOGE, 0.05 ETH, 0.002 BTC, 0.4 LTC, 0.096 BCH. Ixesha lokubheja kubo ziintsuku ezimbini. Kule meko, ukubheja yi-x50.
Kubathengi abaqhelekileyo, iimeko ezizodwa ziyasebenza. Inkqubo ye-VIP inamanqanaba ali-10 kwaye ibandakanya inani elikhulu lezipho ezahlukeneyo ezimnandi, izibonelelo ezinkulu kunye nokubuyisa imali.
Ukulungiselela, unokuzalisa idiphozithi kwaye urhoxise inzuzo kule mali ilandelayo: IRUB, i-USD, i-EUR, i-NZD, i-CAD, i-AUD, i-PLN, i-NOK, i-JPY, i-ZAR, i-BTC, i-BCH, i-LTC, i-DOGE, i-ETH. Indawo yekhasino ekhawulezayo yamkela imali yedijithali, ethi yonyuse umtsalane wayo emehlweni eendwendwe, kuba ayirhafiswa.
Intengiselwano yezemali yekhasino ye-Fastpay yenziwa phantse zonke iinkqubo zokuhlawula ezithandwayo. Ezona ndlela zidumileyo zokufaka imali zezi: Visa, Mastercard, Maestro, Webmoney, Ecopayz, Neteller, Mifinity, Skrill, Muchbetter, Transfer Rapid, EcoVoucher, Neosurf, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Tether.
Iirisithi zenziwa kwangoko kwaye azifuni khomishini, ngaphandle kweWebmoney. Inani lokuzaliswa kwediphozithi liyahluka kuluhlu ukusuka kwi-10 kuye kwi-4000 EUR/USD. Kwimali yedijithali, intlawulo encinci iya kuba yi-0.0001 BTC, i-0.01 ETH, i-0.01 LTC, i-1 DOGE, i-0.001 BCH.
Ungarhoxisa inzuzo usebenzisa iWebmoney, i-Ecopayz, iNeteller, iSkrill, i-Muchbetter, ukuhanjiswa okukhawulezileyo, iMifinity, iBitcoin, iLitecoin, i-Ethereum, iDogecoin, iTether. Inkqubo yenziwa ngaphandle kokuyalelwa kwaye ithatha ukuya kuthi ga kwiiyure ezimbini. Ukuqinisekisa isazisi, umsebenzisi kufuneka ahambe kwinkqubo yokuqinisekisa.